Wax ka Baro Awoodaha Cajiibka Ah Ee Allah (SW) Ku Mannaystay Xayawaanka Qaar | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Wax ka Baro Awoodaha Cajiibka Ah Ee Allah (SW) Ku Mannaystay Xayawaanka Qaar
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 7-08-16 12:12 PM Noolaha waxa uu Alle (SWT) ku kala duway maskaxda oo uu si gaar ah Aadamaha uga faddilay noolaha kale oo dhan. In kasta oo aanu xayawaanku garaad lahayn, haddana waxa uu Alle siiyey awoodo badan oo ka kaba nusqaantaas, qaar badan oo ka mid ahna aanu aadamuhu lahayn. Awoodahaas xikmadaha Rabbaaniga ah ee ku jiraa waa in xayawaankani uu yeesho awood uu kula qabsan karo deegaanka iyo hadba duruufaha uu la nool yahay. Qormadan oo Somalistars.net u Soo Badashay af Somali waxaa aynu ku eegaynaa qaar ka mid ah hawoodahaas xayawaanka uu Alle ku xoojiyey
1. Biciidka Sagaarada Sida ay xaqiijiyeen khubarada baadhaha dabeecadaha iyo nolosha xayawaanku, xayawaanka Biciidka la yidhaahdaa xilliga jiilaalkii waxa uu wax ka beddelaa midabka dabiiciga ah ee maqaarkiisa sare, waxa aanu u ku badiyaa caddaanka, taas oo ay khubaradu ku macneeyeen in midabkaasi uu iska caabbiyo falladhaha qorraxda, taanina ay tahay hab abuur ah oo Alle ugu talogalay in xayawaankani xilliga xagaagii kulaylka badan ee qorraxda kaga raysto.
3. Balan-baalista:Balan-baalista oo sida aynu la soconno ka mid ah xayawaannada kuwa taagta daran, ayaa leh awood abuur ah oo ay nolosheeda ku ilaaliso. Waxa ay awood u leedahay in ay dhadhamiso shay kasta iyada oo aan cunin jidhkeedana aanu gelin.
4. Jeer:Jeerta oo ah xayawaan berri-biyood aad u xoog badani waxa ay leedahay awood Rabbaani ah oo jidhkeedu uu ku soo daayo dareere shaqadiisu tahay in uu qaboojio, ka ilaaliyo qallaylka (qoyaan u sameeyo), liddi ku ah cudur-sidayaasha iyo fayrasyada kala duwan isla markaana qorraxda ka ilaaliya.
5. DolphinXayawaanka Dolphin ee bad ku noosha ahi waxa uu awood abuur ah u leeyahay in marka uu seexanayo ay maskaxdiisu qayb ahaan uun seexato, halka qaybta kalana ay soo jeeddo, sidoo kale labadiisa indhood midkood waa uu xidhaa, isha kalana kala badh ahaan ay furantay. Arrintaas oo ay khubaradu ku tilmaameen in ay tahay hab uu xayawaankani kula socdo waxa hareerihiisa ka socda iyo haddii uu cadow ku soo fool leeyahay.
Quraanshada oo ah xayawaan aad u taagdaran, balse leh awoodo ay ugu muhiimsan tahay in ay leedahay hab maamul dowladnimo u eeg oo kala dambayn iyo amar kala qaadasho ku jirto, isla markaana leh hab nololeed isu dheelli tiran oo ay u qaybsan tahay maamul, shaqaale iyo raciyad.
Quraanshada caadi ahaan ma’ seexato sida in badan oo noolaha ka mid ahi habeenkii seexdo. Khubarada xayawaanka u kuur galaa waxa ay sheegeen in qudhaanjadu ay boqollaal jeer oo maalintii ah hadba waqti aad u yar yara suurto ama dhakoosho, taasina ay kabto hurdo la’aanteeda aanay abuur ahaan seexan waqti buuxa.